နိုင်ငံခြားကျောင်းသားFAQ | ပြည်ပကျောင်းသားများအတွက်သိကောင်းစရာ | JES（Japan,Education and Senmongakko）
ဒီမှာတော့ နိုင်ငံခြားသားကျောင်းသားများက သိချင်နေသောအကြောင်းအရာများကိုမေးမြန်းထားသော Q&A ပုံစံမျိုး ရှင်းလင်း ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
03　ဂျပန်နိုင်ငံဝင်ခွင့်ဗီဇာကလိုအပ်ပါသလား။ ဘယ်လိုမျိုးဗီဇာမျိုးလဲ။
04　နိုင်ငံခြားသားက အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့် အချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ပါသလား၊ တခြားကန့်သတ်ချက်များရှိပါ သလား။
07　ဂျပန်မှာနေထိုင်ဖို့ ဘယ်လိုမျိုးရှာဖွေပါကကောင်းသလဲ။
08　ဂျပန်မှာhome stayကဖြစ်နိုင်ပါသလား။
09　ဂျပန်မှာ နိုင်ငံခြားသားမို့ room share ဖြင့်နေနိုင်ပါသလား။
10　ဂျပန်ရဲ့ငလျင် နဲ့ ဆူနာမီက စိုးရိမ်စရာရှိပါသလား။
11　ဂျပန်ရဲ့ကျန်းမာရေးအဆင့်ကဘယ်လောက်ပါလဲ။ နိုင်ငံခြားသားမို့ ဂျပန်ရဲ့ဆေးရုံတွေမှာကုသမှုခံယူနိုင်ပါသလား။
13　အမိနိုင်ငံရဲ့စားသောက်ဖွယ်ရာများကို ဂျပန်မှာရရှိနိုင်ပါသလား။
16　ဂျပန်နိုင်ငံကနေတခြားနိုင်ငံများသို့ ခရီးသွားလာနိုင်ပါသလား။
18　နိုင်ငံခြားသားများလည်းဂျပန်ရဲ့လက်ကိုင်ဖုန်းနှင့် အင်တာနက်ကိုလျှောက်ထားနိုင်ပါသလား ။
19　ဂျပန်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ခရစ်ယာန်၊ အစ္စလမ်ဘာသာများရှိပါသလား။
01　ဘယ်လိုအထူးပြုကျောင်းများရှိပြီး ဘယ်နေရာဘယ်လိုစားသောက်ရမယ်ဆိုတာတဲ့သတင်းအချက်ကိုဘယ်နေရာ ကနေ သိရှိနိုင်မလဲ။
03　အတန်းသင်ခပေးရပါသလား၊ တခြားကုန်ကျစရိတ်များရှိပါသလား။
04　စကော်လာရှစ်လျှောက်လို့ရနိုင်လား၊ ဘယ်လိုမျိုးစကော်လာရှစ်မျိုးရှိပါသလဲ။
06　ပညာသင်ကြားနေစဉ်အတွင်းအလုပ် ဒါမှမဟုတ်အချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ပါသလား။
01　ဂျပန်ဘာသာသင်ကျောင်းများကိုပြီးဆုံးပါက ဂျပန်ရှိအသက်မွေးပညာကျောင်းများကို ၀င်ရောက်နိုင်ပါ့မလား။
02　ဂျပန်ဘာသာကျောင်း(language school)ပြီးဆုံးပြီးနောက် ဂျပန်မှာအလုပ်ဝင်ခွင့်ရနိုင်ပါသလား။
03　အတန်းသင်ခပေးရပါသလား၊ တခြားကုန်ကျစရာများရှိပါသလား။
04　ဘယ်လိုနေရာတွေမှာ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဂျပန်ဘာသာကျောင်းတွေရှိတယ်ဆိုတာနှင့် ပတ်သတ်သောသတင်းအချက်အလက် များကို ဘယ်နေရာမှာရရှိနိုင်ပါသလဲ။
05　စကော်လာရှစ်လျှောက်လို့ရနိုင်လား၊ ဘယ်လိုမျိုးစကော်လာရှစ်မျိုးရှိပါသလဲ။
07　ပညာသင်ကြားနေစဉ်အတွင်းအလုပ် ဒါမှမဟုတ်အချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ပါသလား။
-> သင့်စိတ်ကြိုက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်းကြီးဋ္ဌာနများနရဲ့ ဆိုဒ်မှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဂျပန်သံရုံး၊ ကောင်စစ်ဝန်ရုံးတို့တွင် ဂျပန်ရဲ့ သတင်းအချက်များကို သိရှိနိုင်ပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာန၊ သံရုံး၊ ကောင်စစ်ဝင်ရုံး တရားဝင်ဆိုဒ်များ တွင် လေ့လာပါ။
-> ကျောင်းစရိတ်၊ နေထိုင်မှုစရိတ်၊ နေထိုင်တဲ့နေထိုင်နေရာပေါ်မူတည်ပြီး ယန်း(၁၀)သောင်းလောက် ကျလောက်ပါတယ်။ နေထိုင်မှုစ ရိတ်က ပုံမှန်အားဖြင့် နေရာပေါ်မူတည်ပြီး လူနေများသောနေရာများတွင်ဈေးကြီးနိုင်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းများကိုတော့ ဒီဆောင်းပါးမှာ လေ့လာပါ။
-> ဂျပန်ရဲ့ကျောင်းများကိုတက်ရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဗီဇာကလိုအပ်ပါတယ်။ ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာလုပ်ဆောင်မှုကတော့ဒီဆောင်းပါးမှာလေ့လာပါ။
->ဂျပန်မှာတော့ နိုင်ငံခြားသားရဲ့အလုပ်အကိုင်ကိုကန့်သတ်ထားတာမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဗီဇာနှင့် တက်နေသောကျောင်းရဲ့ စည်းကမ်းနှင့်စည်းမျဉ်းများအရ အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့အချိန်နဲ့ နေရာကတော့ကန့်သတ်ထားပါတယ်။ ပြစ်မှုမလုပ်ဖြစ်အောင် သေသေချာချာလေ့လာဖို့လိုပါတယ်။
-> ဂျပန်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ထိပ်တန်းအဆင့်လုံခြုံငြိမ်းချမ်းသောနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ ပြစ်မှုဖြစ်ပွားမှု နည်းပါးပြီး ညများတွင် ပြသနာ မရှိပဲသွားလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြစ်မှုလုံးဝမဖြစ်တာတော့မဟုတ်တဲ့အတွက် အန္တရာယ်များသောနေရာများကို ရှောင်ရှား သွားဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ်ကိုကိုယ်ဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။
-> ဂျပန်လူမျိုးများဟာနိုင်ငံခြားသားများအပေါ်ဖော်ရွေစွာဆက်ဆံတဲ့အတွက် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများနှင့် ဘက်လိုက်ဆက်ဆံ မှုများ မရှိသလောက်ပါလို့ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံခြားသားများအသွားအလာနည်းပါးသောဒေသများရှိ လူများ ဂျပန် စကားပဲ ပြောဆိုတတ်သောလူများကတော့ တခြာဘာသားစကားများနားမလည်သောကြောင့် အဆင်မပြေနိုင်တာတွေတော့ ရှိနိုင်ပါတယ်။
-> တက်ရောက်ရမဲ့ကျောင်းရဲ့အဆောင်များ စီစဉ်ပေးမှုများလဲရှိပေမယ့် အများအားဖြင့် နိုင်ငံခြားကျောင်းသားများဟာ apartment နဲ့ massionတို့တွင်နေထိုင်ကြပါတယ်။ အခန်းများရှာဖွေတဲ့နေရာမှာတော့ ကျောင်းမှာတိုင်ပင်ပြီး အင်တာနက်နှင့် ၀န်ဆောင်မှုရုံးများတွင် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
-> နေထိုင်နိုင်ပါတယ်။ home stayနေထိုင်မဲ့နေရာနဲ့ ကျောင်းသွားလာမှုကို ရွေးချယ်ပြီး သွားလာမှုအဆင်ပြေစေရန်ရွေးချယ် ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်။
-> နေထိုင်နိုင်ပါတယ်။ အင်တာနက်နဲ့သတင်းအချက်များကို လေ့လာပြီး လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ လျှောက်ထားတဲ့နေရာမှာ အခြေအနေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။ အထုပ်အပိုး၊ နိုင်ငံခြားသားလက်ခံမှု၊ ကျားမကန့်သတ်ချက် များကို သေချာလေ့လာဖို့ လိုပါတယ်။
10　ဂျပန်ရဲ့ငလျင် နဲ့ဆူနာမီက စိုးရိမ်စရာရှိပါသလား။
-> ဂျပန်ရဲ့ငလျင်ဟာ သဘာဝတရားဖြစ်တာကြောင့် မထိန်းချုပ်နိုင်ပါဘူး။ အမြဲတမ်းအင်းအားပြင်းငလျင်ကတော့မလှူပ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုပြင်ဆင်ထားဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။
-> ဂျပန်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အဆင်မြင့်ဆေး ပညာထွန်းကားသောနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နိုင်ငံခြားသားလည်း အဆင့်မြင့် ဆေးပညာအပါအ၀င် ဂျပန်ရဲ့ဆေးရုံများမှာ ကုသမှုခံယူနိုင်ပါတယ်။ ဂျပန်မှာ ဆေးကုသစရိတ်လျှောပေါ့ပေးဖို့အတွက် ကျန်းမာရေး အာမခံရှိပါတယ်။ အသေးစိတ်ကတော့ ဒီဆောင်းပါးရဲ့ ဆေးပညာနေရာမှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
-> ဂျပန်ကွန်ပျူတာရဲ့ ပုံစံနဲ့ အားသွင်းမှုဟာ နိုင်ငံအလိုက်ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအခါမျိုးမှာ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကိုတိုက်ရိုက် အသုံးမပြုနိုင်ဘဲ ကြားခံ(adapter) ကလိုအပ်ပါတယ်။
-> ဘာသာမျိုးစုံနေထိုင်သော ဒေသများမှာတော့ အစားအသောက်တင်သွင်းသော စူပါမားကတ်များနှင့် နိုင်ငံခြားအစားအစာ ရောင်းဆိုင်များရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့နိုင်ငံရဲ့ ဈေးနှုန်းနဲ့ ရောင်တဲ့ဈေးနှုန်းကတော့ များနိုင်ပါတယ်။
-> ဂျပန်တနိုင်ငံလုံးမှာ ဂျပန်စကားကိုအသုံးပြုသောကြောင့် ဂျပန်စကားနားမလည်သော ဒေသမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒေသိယ ဘာသာစကားကတော့ရှိတဲ့အတွက် အချို့ဒေသများတော့ ဂျပန်စကားနားလည်ရခက်နိုင်ပါတယ်။
-> ဂျပန်လူမျိုးပါကန့်သတ်ထားသော တချို့သောငလျင်နှင့် ဆူနာမီ ဖြစ်ပွားထားသောနေရာများမှလွဲ၍ ဂျပန်တနိုင်ငံလုံး လွတ်လပ်စွာခရီးသွားနိုင်ပါတယ်။
-> သွားလာနိုင်ပါတယ်။ ဂျပန်မှာတော့ ခရီး သွားလာမဲ့ နိုင်ငံရဲ့ ခရီးသွားဗီဇာကမလိုအပ်တဲ့နိုင်ငံများလဲရှိပါတယ်။ ကိုယ်သွား လာချင်သော နိုင်ငံက ဗီဇာမလိုအပ်ပဲသွားလာနိုင်လား ပြီးတော့ဂျပန်နိုင်ငံကနေ ဗီဇာလျှောက်ထားခြင်းသတင်း အချက်များကို လေ့လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
-> လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ အမျိုးမျိုးသောေ ငွပေးချေမှုများအတွက်အသုံးပြုရန်၊ အချိန်ပိုင်းအလုပ်နှင့် စကော်လာရှစ် ရရှိမှုများ ရှိပါက ဘဏ်အကောင့်လိုအပ်ပါတယ်။ ဘဏ်ကောင်တာများတွင်ရှင်းပြမှုကို ဒီဆောင်းပါးမှာ သတင်းအချက်များကို လေ့လာ နိုင်ပါတယ်။
-> လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ လက်ကိုင်ဖုန်းများကို လက်ကိုင်ဖုန်းအရောင်းဆိုင်များကိုသွားရောက်ပြီးလုပ်နိုင်ပါတယ်။ လုပ်ချင် တဲ့ အစီအစဉ်အတိုင်း ပိုက်ဆံပေးချေမှုများနိုင်ပြီး အချို့ကိစ္စများမှာ နားလည်ဖို့ခက်ပါတယ်။ ဒီလိုအခါမျိုးမှာ prepaid card များ ကိုအသုးံပြုနိုင်ပါတယ်။ အင်တာနက်လည်း လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ နေထိုင်သော ကျောင်းအဆောင် ဒါမှမဟုတ် apartment တွင် အင်တာနက် တပ်ဆင်လို့မရတဲ့အခြေအနေ့ရှိတာကြောင့် မပြုလုပ်ခင် အတည်ပြုဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
-> ဂျပန်နိုင်ငံဟာ ဘာသာရေးကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပြုသောနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံနေရာအတော်များများမှာ နတ်ဘုရားကျောင်း ရှိပြီး ကြီးမားတဲ့မြို့များမှာတော့ ဗလီနှင့် ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းများရှိုပါတယ်။ နေထိုင်တဲ့မြို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှာကြည့် နိ်ုင်ပါတယ်။
-> ရှိပါတယ်။ အွန်လိုင်းကနေမှာယူနိုင်ပြီး တခါတရံကံမကောင်းစွာပဲ halalမဟုတ်သော စားစရာများလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ Japan Muslim Association,areligious corporation ထိုအဖွဲ့မှ သတ်မှတ်ထားသော စားစရာများမှာ စိတ်ချရပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် အသေးစား အစ္စလမ်အသိုင်းအ၀ိုင်းများရှိတဲ့အတွက် အဲဒီဒေသများမှာတော့ စူပါမားကတ်များ သီးသန့် ဆိုင်များမှာhalal အစားအစာများကိုဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
-> ဒီဆောင်းပါးရဲ့ လုပ်ချင်သောအလုပ်အကိုင်နှင့် ဒေသများကနေ အထူးပြုကျောင်းများကိုရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
->အထူးပြုကျောင်းများဝင်ရောက်သင်ကြားနိုင်ရန်အတွက် ကိုယ်ရဲ့ဂျပန်စာအရည်အချင်းပတ်သက်ပြီး အောက်ပါအချက်အချို့ လိုအပ်ပါတယ်။
1 တရားရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနရဲ့ ဂျပန်ပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းက သတ်မှတ်မှုအရ (၆) လကျော်တတ်ရောက်သင်ကြား ထားသူ
2 Japan International Education Support Association and the Japan Foundationကဦးစီးကျင်းပသော ဂျပန်စာ အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ N1ဒါမှမဟုတ်N2ကိုအောင်မြင်ရပါမယ်
3 ဂျပန်ရဲ့ မူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းကျောင်းကို (၁) နှစ်ကျော်တတ်ရောက်သင်ကြားထားသူ
4 ဂျပန်နိုင်ငံခြားစာမေးပွဲ 〔ဂျပန်စာ（အဖတ်နှင့် နာလည်မှုစုစုပေါင်း）〕အမှတ် (၂၀၀) ကျော်ရရှိသူ
5 ဂျပန်ခန်းဂျီးစွမ်းရည်အဖွဲ့အစည်းဖောင်ဒေးရှင်းကျင်းပသော BJTစီးပွားရေးဂျပန်စာစာမေးပွဲ အမှတ် (400) ကျော်ရရှိသူ
（ကိုးကားချက်）Gateway to Study in JAPAN「အထူးပြုကျောင်း」
03　သင်တန်ကြေးပေးရပါသလား၊ တခြားကုန်ကျစရာများရှိပါသလား။
->ယေဘူယျအားဖြင့် သင်တန်းကြေး ဟာကျောင်းဝင်ရောက်ချိန်မှာ ကျောင်းဝင်ကြေးပေးဆောင်ရပါတယ်။ နယ်ပယ်အလိုက် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်စရိတ်စသည်ဖြင့် အသုံစရိတ်များလိုအပ်သော အခြေအနေလဲရှိနိုင်ပါတယ်။ ဂျပန်ဘာသာပညာရေးနှင့် ပတ်သတ်သော သင်တန်းကြေးနှင့် ကျောင်းဝင်ကြေးနှုန်းထားအနေနဲ့ကတော့ ဒီဆောင်းပါးအတွင်းရှိ သတင်းအချက်အလက် များကို မှီငြမ်းကိုးကားမှုပြုနိုင်ပါတယ်။
-> အမျိုးမျိုးသော ပညာသင်ဆုငွေများရှိပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးအတွင်းရှိ အချက်အလက်များကိုမှီငြမ်းကိုးကားနိုင်ပါတယ်။ တဖန် ဒီပေ့ခ်ျမှာတော့ ပညာသင်ဆုငွေအမျိုးအစားများစွာကိုရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မိမိတို့ကျောင်းသီးသန့် သတ်မှတ်ပေး ထားသော ပညာသင်ဆုငွေချီးမြှင့်သောကျောင်းများလဲရှိပါတယ်။
-> ကျောင်းဝင်ခွင့်မှာအသက်အရွယ်အပိုင်းအခြား ကန့်သတ်ထားသော ဂျပန်ဘာသာကျောင်းဆိုပြီး အားလုံးနီးပါးတော့မရှိပါ ဘူး။ ပိုသေချာစေဖို့အတွက်ကတော့ မိမိဆန္ဒရှိတဲ့ဂျပန်ဘာသာကျောင်းကိုတိုက်ရိုက်စုံစမ်းမေးမြန်းအတည်ပြုပါ။
-> လုပ်ကိုင်နိုင်ပါတယ်။ သို့ရာတွင်ဗီဇာနှင့် မိမိတက်ရောက်နေသော ကျောင်းရဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအလိုက် အလုပ်လုပ် ကိုင်နိုင်သော အချိန်နှင့်အလုပ်အမျိုးအစားကန့်သတ်ချက်များလဲရှိနိုင်ပါတယ်။ ချိုးဖောက်ကျုးလွန်မှုမဖြစ်ရလေအောာင် သေ ချာစွာ အတည်ပြုဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။
-> ဂျပန်ဘာသာသင်ကျောင်းများကိုပြီးဆုံးပါက အလိုအလျောက်အသက်မွေးပညာသင်ကျောင်းများကိုဝင်ရောက်နိုင်တာ တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ကျောင်းဝင်ရောက်နိုင်ရန် အထူးပြုဝင်ခွင့်စာမေးပွဲများကိုဝင်ရောက်ဖြေဆို၍ အောင်မြင်ဖို့လိုအပ်ပါ တယ်။ သို့ရာတွင်ဒီအထဲမှာမှ ကျောင်းဝင်ရောက်နိုင်စေရန် ထောက်ခံပေးသောကျောင်းများလဲရှိသည့်အတွက် (မိမိတက်ရောက် သောဂျပန်ဘာသာသင်တန်ကျောင်းကိုလဲတိုက်ရိုက်မေးမြန်းအတည်ပြုပါ။)
02　ဂျပန်ဘာသာကျောင်း(language school)ပြီးဆုံးပြီးနောက် ဂျပန်မှာအလုပ်ဝင်ခွင့်ရနိုင်ပါသလား?
-> ၀င်လို့်ရနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမှာတော့ အလုပ်ဝင်ခွင့်လုပ်ရှုားမှုပြုလုပ်၍ အလုပ်ရှာဖွေခြင်းပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သို့ရာတွင်ဒီအထဲမှာမှ လုပ်ငန်းခွင် ၀င်ရောက်နိုင်အောင်ထောက်ခံပေးနိုင်သော ကျောင်းများလဲရှိတဲ့အတွက် ဂျပန်စာကျောင်း ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
03　ဘယ်လိုနေရာတွေမှာ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဂျပန်ဘာသာကျောင်းတွေရှိတယ်ဆိုတာနှင့် ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက် များကို ဘယ်နေရာမှာရရှိနိုင်ပါသလဲ?
-> ယေဘုယျအားဖြင့် ဂျပန်ဘာသာစကားဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့အစည်း(ဂျပန်ဘာသာအခန်းကဏ္ဍနှင့်ပညာရေးလမ်းညွှန်) တို့၌မိမိနေရပ်လိပ်စာ၊ မွေးဖွားရာဒေသ၊ အသုံးစရိတ်စသည်တို့အားဖြင့် ကျောင်းမှာစုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ သို့ရာတွင် အဖွဲ့အစည်းထဲမှာမပါဝင်သော ဂျပန်ဘာသာသင်ကျောင်းများလဲရှိပါတယ်။
-> ယေဘူယျအားဖြင့် သင်တန်းကြေးဟာကျောင်းဝင်ရောက်ချိန်မှာ ကျောင်းဝင်ကြေးပေးဆောင်ရပါတယ်။ နယ်ပယ်အလိုက် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်စရိတ်စသည်ဖြင့် အသုံစရိတ်များလိုအပ်သော အခြေအနေလဲရှိနိုင်ပါတယ်။ ဂျပန်ဘာသာပညာရေးနှင့် ပတ်သတ်သော သင်တန်းကြေးနှင့် ကျောင်းဝင်ကြေးနှုန်းထားအနေနဲ့ကတော့ ဒီဆောင်းပါးအတွင်းရှိ သတင်းအချက်အလက် များကို မှီငြမ်းကိုးကားမှုပြုနိုင်ပါတယ်။
-> အမျိုးမျိုးသော ပညာသင်ဆုငွေများရှိပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးအတွင်းရှိ အချက်အလက်များကိုမှီငြမ်းကိုးကားနိုင်ပါတယ်။ တဖန် ဒီပေ့ခ်ျမှာတော့ ပညာသင်ဆုငွေအမျိုးအစားများစွာကိုရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ ဒါအပြင် မိမိတို့ကျောင်းသီးသန့် သတ်မှတ်ပေး ထားသော ပညာသင်ဆုငွေချီးမြှင့်သောကျောင်းများလဲရှိပါတယ်။
07　ပညာသင်ကြားနေစဉ်အတွင်းအလုပ် ဒါမှမဟုတ်အချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ပါသလား?